Mareykanka Oo 100 Askari Ka Dilay Nidaamka Bishaar Al-Asad Kadib Weerar Ka Dhacay Suuriya.
Thursday February 08, 2018 - 12:18:30 in Wararka by Super Admin
Khasaara lixaad leh ayaa ciidamada Nidaamka Bishaar Al-asad kasoo gaaray weerar xagga cirka ah oo diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay ka fuliyeen Bariga wadanka Suuriya.
Wararka ka imaanaya gobolka Deyruzuur ayaa sheegaya in melleteriga Mareykanka ay weerar ku qaadeen ciidamo katirsan dowladda Suuriya xilli ay isku dayayeen in ay weerar ku qaadeen maleeshiyaadka Kurdiyiinta SDF.
Mas'uul Mareykan ah oo diiday in magaciisa lasoo xigto ayaa wakaaladda wararka Reuters u xaqiijiyay in ay dileen 100 askari oo Suuriyaan ah kadib markii ay isku dayeen in ay weeraraan xarumo Maleeshiyaadka Kurdiyiinta ay ku lahaayeen Bariga gobolka Deyruzuur.
Mareykanka ayaa weerarkan ku tilmaamay difaacu nafsi wuxuuna ku faanay in si adag oo awood leh ay u difaaceen xulufadooda dhulka.
Wararka ayaa intaas ku daraya in Maalintii arbacada ee shalay ay ciidamo gaaraya 500 oo askari ay udhaqaaqeen degmooyin katirsan gobolka Deyruzuur halkaas oo ay maamulaan maleeshiyaad Mareykanku tababaray waxayna ciidamadaas wateen gaadiid gaashaaman, madaafiicda goobta iyo hub casri ah balse waxay weerar cirka iyo dhulka ah kala kulmeen ciidamada Mareykanka.
Weerarkan lagu laayay ciidamada Bishaar Al-asad ayaa larumeysanyahay in uu farriin adag u yahay dowladda Turkiga oo dagaal kula jirto maleeshiyaadka Kurdiyiinta wakiillada Mareykanka ee Mandiqadda.
Dowladda Mareykanka ayaa 11 saldhig oo waaweyn ku leh waqooyiga iyo Bariga Suuriya waxayna taageero hagar la'aaneed siisaa Maleeshiyaadka Kurdiyiinta oo ay ka dhigatay ciidamadeeda dhulka waxaana muuqata in difaacidda Maleeshiyaadkan uu Mareykanku wax walba ku bixinayo, illaa iyo hadda wax jawaab ah kamasoo bixin dowladda Ruushka oo isbaheysi la ah Nidaamka Bishaar Al-asad.
Waa Ciidamadii ugu badnaa ee Mareykanku ka dilo Nidaamka Bishaar Al-asad oo ay wadaag ku ahaayeen xasuuqa dadka shacabka ah.